कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन बनाउने प्रतिष्पर्धामा कस्ले बाजी मार्ला ? कुन कुन देश के गर्दैछन् - चारदिशा
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन बनाउने प्रतिष्पर्धामा कस्ले बाजी मार्ला ? कुन कुन देश के गर्दैछन्
April 5, 2020 चारदिशा अन्तराष्ट्रिय,समाज
काठमाण्डौं – विज्ञानका ठूला आविष्कार गरेर आफूलाई अब्बल जिवित प्राणी सावित गरिसकेको मानिसका सामु नयाँ चुनौती थपिएको छ । मंगल ग्रहमा पुग्ने लक्ष्य लिइसकेको मानिसलाई आँखाले देख्न नसकिने भाइरसले चुनौती दिएर अस्तित्वमाथि नै प्रश्न तेर्साइदिएको छ ।
विश्वभर महामारी बनेको कोरोना भाइरसले मानवीय क्षति बढाइरहेको छ । विश्वभर १२ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । मर्नेको संख्या ६४ हजार नाघिसकेको छ । तर, मानव जाति भाइरसविरुद्ध संघर्षरत छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण (कोभिड १९) विरुद्धको भ्याक्सिनको पहिलो मानव परीक्षण भएको छ । भ्याक्सिन विकासमा लागेको अमेरिकी कम्पनि हो मोडर्ना थेरापेटिक्स ।
पहिलो परीक्षण सफल र सुरक्षित देखिएमा यसको पुनः परीक्षण ४५ जनामाथि हुनेछ । ती ४५ जना सार्स, कोभ- २ र कोभिड- १९ को भाइरसबाट संक्रमित नभएको हुनुपर्नेछ । उनीहरुले तीन किसिमका भ्याक्सिनको मात्रा प्रयोगमा ल्याउनेछन् । जसले रोगप्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्ने भनिएको छ । यसमध्ये कुन चाहिं सबैभन्दा सफल र प्रभावकारी हुन्छ भनी परीक्षणबाट पत्ता लाग्नेछ । साथै त्यसको साइड एफेक्टको समेत अध्ययन हुनेछ ।
अष्ट्रेलियाअस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान संगठन ९सिसिरो० ले कोरोनाभाइरस प्रतिरोधी खोप (भ्याक्सिन) को परीक्षण शुरु गरेको छ । सिसिरोले मेलबोर्नबाट ७५ किलोमिटर दक्षिणको गीलोङस्थित अस्ट्रेलियाली पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला (एएएचएल) मा पहिलो चरणको परीक्षण आरम्भ गरिएको बिहीबार घोषणा गरेको हो । यो परीक्षण करिब तीन महिनामा सम्पन्न हुनेछ । यो भ्याक्सिनको प्रभावकारिता र सुरक्षात्मक स्थितिका बारेमा एक प्रकारको मुसामा परीक्षण गर्न लागिएको सिसिरोले जनाएको छ ।
खोप कहिले आउँला
विश्व स्वास्थ्य संगठनकी इमर्जेन्सी कार्यक्रमकी प्रमुख डा. मारिया भान केरकोभीले विश्वभर २० प्रकारका खोप विकास भइहेको बताएकी छिन् । उनको भनाई उदृत गर्दै रुसी समाचार संस्था तासले भनेको छ, ‘कोभिड-१९ विरुद्ध कम्तिमा २० खोप विकासको चरणमा छ ।’ खोपको क्लिनिकल परीक्षण शुरु भइसकेको उनले बताइन् ।
यसैगरी, अलिबाबा समूहका संस्थापक ज्याक माले खोलेको ज्याक मा फाउन्डेसनले कोरोना भाइरसको खोप निर्माणका लागि १ करोड ४४ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यो रकम कोरोना भाइरसको खोपको अनुसन्धान र निर्माणमा खर्च गरिने फाउन्डेसनले जनाएको छ ।- एजेन्सीको सहयोगमा Photo Source: TASS, AP and other Agencies
किन लुकाउछन नेपालीहरु कोरोना सन्क्रमण ?